Xalayaa Banaa Hogganoota ABO, ADO, ABO Tokkoomee fi KWOf -
bilisummaa July 16, 2016	1 Comment
Murna itti mataa taatan qabattanii walitti dhuftanii qabsoo saba guddaa dammaqe kanaa hogganuu ni dandeessuu fi hin dandeessanii keessanuu mariyachuuf of kennaa hin jirtani
Yeroo ummanni maaloo tokkoomaa nu gammachiisaa jedhee isin kadhatu miira an-caalinnaa (ego) mataa keessaniif dursa kennuu mannaa dantaa ummatichaaf gad of qabdanii tokkoomtanii waliin hojjechuuf garaa keessan irraa qophii agarsiisaa hin jirtani
Mirqaana deemsi qabsoo ummata keenyaa argamsiiseen onnattanii yookiis dhiibamtanii ‘gamtaa qabsoo tolfanne’ jettanii abdii sabaaf kennuu irraa kan hafe, waadaa saba duratti seentan san eessaan akka geessan hanga ammaa ifaa miti.
Odoma taheeyyuu ummanni keenya ABO tokkoomee surraa isaa guddicha kaleessaatti deebi’u arguu barbaada malee adda addummaa keessan qabattanii ‘gamtaa’, ‘tumsa’, ‘agoobara’ waan jedhamu qofatti quufee isin abdata jedhee an hin yaadu.
Isin warra baatii lama dura ‘gamtaa’ wayii jaarranne jedhee labsate keessaa ADO irraa kan hafe, warri kaan kaayyoo walabummaa Oromiyaatti amantu eega tahee, wanni walitti araarmtanii jaarmayaa keessanis hin tokkoomsineef ifaa miti.
Humna qabsichaa daranuu ol guddisuuf jecha, dhaloota haaraa haalaan qabsichaaf gumaachuutti jiru hunda waliin abbaa fi ilmaan taatanii waliin hojjechuu yookiis baallii hoggansa qabsoo walitti dabarsuuf of kenniinsi garii keessan irraa hin mul’atu. Gariin keessan dargaggoota Oromoo qaroo fageenya irraayis tahu qooda diinni itti hinaafu gumaachaa jiraniin boonuu fi ittiin dhaadachuu mannaa, akka masaanuutti yoo of irraa eeggattan taajjabaa jirra.
Dhaloota haaraa Oromoo hamilee fi hawwii takkittii waliin qabu gidduutti walshakkii uumuudhaan garii maqaa ‘Qeerroo Bilisummaa’ jedhuun of jalatti iggittanii daandii qoodamiinsa keessanii akka dhaaluu fi sabboontota laalcha keessan qeeqan akka diinaatti hubachuun joolleen akka wal irratti duultu gochuuf wanni hojjechaa jirtan hegeree tokkummaa qabsaayota Oromoo irratti balaa ulfaataa farrisaa jira.
Kanneen qaama ABO turtan, amma illee taatan fi maqaa ABOs tahee maqaa biraa moggaafattanii kaayyoo walfakkaataadhaan hiriirtanii argamtan cuftuu, miira an-caalinnaa keessan of duuba qabuun saba hoggansa gahaa malee sosso’ee bilisummaa isaaf lubbuu gumaachaa jiru kanaaf dursa kennaatii tokkummaa jaarmayaa uumuuf dhiibbaa ifaa walirratti godhaa.
ABOn har’a Oromoo miliyoona 40 hogganee galii qabsoo isaatiin gahuu danda’u kan amma caccabee bakka meeqa bu’e kana tahuu hin danda’u. Kana dhiisaatii kan ganna 15 dura tokkummaadhaan beekamu saniyyuu daran gateettii bal’aa fi irree irra-jabaa kan horate tahuutu irraa eegama. Isin warri wal irraa deemtan kun walitti deebitanii tokkoomuu qofayyuu odoo hin taane, gatiittii irra bal’aa fi irree irra jabaa diina cabsu akkasii san horachuun dirqama akka tahe yeroodhaan hubadhaa wal hubachiisaa.
Qabsoon saba kamiiyyuu dhaloota haaraa qaroo ol dhufaa jiru harka bal’isee yoo ofitti hin hammanne itti fufiinsa amansiisaa hin qabaatu. Kanaafuu hogganoonni ABO murna murnatti baatanii jirtan dhugaa kana hubachuudhaan dargaggoota keenya qaroo biyya keessattis tahee ala taa’anii seenaa diinniyyuu raajeffate hojjechaa jiraniif dinqisiifannoo, abdannoo fi mararfannoo abbummaa qabaadhaafii. Dargaggoota Oromoo har’a seenaa hojjechaa jiran qaqqaalii qabna. Gariin isaanii kan Tigrootaa fi Amaaronni illee ‘dhalli akkasii silaa nu keessaa argamee maal qaba’ jedhanii itti hinaafaa jiran faa dha. Isaan kun ilmaanuma keessani. Guddisuma keessani malee dhala alagaa isin balleessuuf dhufaa jiruu miti. Kanaafuu sodaa, shakkii fi hinaaffaa ilmaan guddisa keessanii kana irratti dogoggoraan horattan yoo qabaattan hatattamaan akka sirreeffattan, joollee tana keessaa kan dogoggora irratti argitan yoo jiraatanillee mooyxannoo kuuffattan keessaa isa jaaraa tahe dhaalchisuun gorsa abbummaatiin kunuunstanii baallii hoggansa qabsoo itti dabarsuuf akka of qopheessitanin dhaama.
Waldhibdee dhunfaa yookiin wal jala yaa’uu dadhabuu walii keessan gidduutti qabdan dhukkubsachiisuuf jecha dhaloota haaraa garii ofitti hammattanii garii of irraa eeggachuu kana irraa akka jabeessitanii of qusattanin hawwa. Wal diddaan walii keessan gidduutti qabdan isinuma irratti haa raaw’atu. Balaa isiniin dhufee qabsoo Oromooyyuu gaaga’e kana dhaloota haaraaf dhaalchiftanii dargaggoo Oromoo kaayyoo fi hawwii takkittii waliin qaban gidduutti garaagarummaa kan uumtan yoo tahe gaafatamaa seenaa jalaa hin baatani.
Previous SOCHII GUYYAA MURAASAAN KAN BAATII SADDEETI OLII XIQQEESSUUN GAARIIDHAA?-XIINXALA GABAABAA-Jawar Mohaamadiin
Next Warraaqsa Oromoo amma deemaa jirurraa waan barannee fi daandii fuula duraa
Attention seeker!Foolish guy.